Bogga ugu weyn Sida Looga Hawlgaliyo 50 -ka Milyaneer ahaan! Riyooyinka Hawlgabka
Fikirka hawlgabku waa cabsi sida eraygu u dhawaaqo. Cabsidaani waa mid aad u cakiran markii aadan hayn kaydkii dheeraadka ahaa inta aad hawlgab ka noqonayso.
Waa hagaag, hawlgabnimada 50 waa la gaari karaa laakiin sida hawlgab looga dhigo milyaneer waa hadafka cusub!
Wareysiyo lala yeeshay maalqabeenno 50 jir ah oo howlgab noqday ayaa kashifay inta badan sirahooda. Kala badh maqaalkan, waad arki doontaa.
Glean maqaalkan oo baro sida wax loo dhigo si riyooyinkaaga hawlgabka u noqdaan kuwo dhab ah.
Miyuu hawlgabka 50 yahay fikrad wanaagsan?
Waa Maxay Faa'iidooyinka Hawlgabka 50 jirka?
Sida Looga Hawl Galo 50 oo leh $ 1 Milyan
#6 Samir yeelo
#5 La Soco Maalgelintaada Maaliyadeed
#4 Iska yaree Kharashaadkaaga
#3 Keyd Badan
#2 Bilow Kaydinta
#1 Samee Yool
Dadka caanka ah ee ka fariistay sidii milyaneerka 50 jir
Haa, waa fikrad wanaagsan gaar ahaan haddii aad leedahay hami qof waa inaad ka soo baxdo.
Hawlgabka 50 wuxuu ku siinayaa waqtiga aad u baahan tahay oo dhan si aad u raacdo riyooyinkaas oo aad u fuliso.
Sidoo kale, hawlgabnimada 50 waxay kuu horseedi doontaa sannadaha ugu wanaagsan noloshaada.
Asal ahaan, hawlgabnimada 50 jirku waxay kugu haysaa hoggaanka arrimahaaga. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka noqoshada hawlgabka 50.
Waxaad haysataa waqti dheeri ah oo aad ugu hibeyso xiisahaaga
Waxay kaa dhigaysaa inaad ka fogaato gaadiidka joogtada ah
Waxaad fursad u leedahay inaad bilowdo xirfad kale
U -dhaqmidda caafimaadkaaga sida ugu habboon abid
Si qumman u kharash garee
Adigoo qayb weyn ka qaatay noloshaada adigoon wax dhab ah ka qabin kaydinta hawlgabka micnaheedu ma aha inaad sanadahaaga dambe ku bixin doonto dhismahaas.
Sidaa darteed, samee xaashiyahaaga oo mas'uul ka noqo mustaqbalkaaga maxaa yeelay waxay qaadataa qorshe weyn in si guul leh looga fariisto.
Tallaabooyinka hoose waa waxa ay tahay inaad samayso si aad hawlgab u noqoto milyaneer.
Waxay noqon kartaa waqti aad u adag in la isku dayo in la isu geeyo hal ama laba doollar oo aad u adeegsan lahayd wax kale.
Maadaama ay wakhti qaadanayso, waa inaad bilowdaa maal-gashiga hore ugu filan. Sidoo kale, ka digtoonow xaqiiqda ah inaysan jirin wax wanaagsan oo fudud.
Markaa, goor hore oo aad bilowdo waxoogaa kayd ah, ayay u suurogal tahay inay kuu noqoto inaad gaarto yoolalkaaga.
In kasta oo aad si dhab ah uga fekereyso sida aad uga fariisan lahayd 50 jir iyo milyaneer ahaan, waa inaad haysataa xoogaa maalgelin macquul ah oo kuu keeni karta wanaag lacag marka aad hawlgab noqoto
Sidaa darteed, la soco kaydkaaga maaliyadeed oo dheelitir. Tani waa si loo hubiyo in natiijadu ay weli la socoto qorshahaaga hawlgabka.
Asal ahaan, noloshu waxay u muuqataa mid caajis ah iyada oo aan dhammaan waxa ka dhigaya mid fudud oo madadaalo leh?
Ma ogtahay in haddii aad hoos u dhigto qaar ka mid ah waxyaabaha laga yaabo inaad rabto inaad ku calaamadiso sidii loo baahdo, waxaad yeelan doontaa naftaada inaad uga mahadceliso qaybta dambe ee noloshaada?
Qofna ma dhahayo waa inaadan ku noolaan nolol raaxo leh oo aad had iyo jeer rabto. Laakiin markaad si fiican u fiirsato, waxaad ogaataa inay si aad ah u cunaan mushaarkaaga.
Sidaa darteed, si aad wax badan u keydiso, waa inaad wax qabataa adigoon ku bixin kaararkaaga deynta.
Lacagtii ayaa tiri 'maanta i badbaadi berrina waan ku badbaadin doonaa'. Samee caado miyir -qabka ah oo iska dhig 5% - 10% dakhligaaga ugu yaraan.
Waa iyada oo si joogto ah loo sameeyo si ay isugu ururiyaan si ay u noqdaan wadar aad u fiican. Sida badweynta looga sameeyo dhibco yaryar oo biyo ah.
Intaa waxaa dheer, haysato sanduuq degdeg ah oo aad ku xallin karto dhacdooyinka lama filaanka ah adiga oo aan u dhexayn adiga iyo adiga hawlgab qorshe.
Haddii aad ka mid tahay kuwa yar ee ay ku adag tahay inay bilaabaan qorshe keydin, iska diiwaangelinta 401k u qorshee waa jidka loo maro.
Sidee taas u sameysaa?
Si fudud iskaga qor qorshaha iyo xaddiga cayiman ee hore loogu heshiiyey, ayaa si otomaatig ah looga qaadi doonaa mushaarkaaga.
Maadaama habkani yahay mid otomaatig ah, maahan inaad seegto.
Waxa ay tani sameyneyso ayaa ah inay kordhiso keydintaada isla markaana ay si otomaatig ah u yareyso mas'uuliyaddaada iyadoo ku siineysa soo noqosho hubaal ah maalgashigaaga.
Waxaa jirta oraah hore '' haddii aad ku guuldaraysato inaad qorsheysato, waxaad qorsheyneysaa inaad fashilanto '' Tani waa run!
Si aad fikradahaaga run ugu noqoto, waxa aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad dejiso qorshe aadna ugu dhegto.
Sidoo kale, isku day inta aad awooddo si aad ugu dhegto miisaaniyaddaada.
Ninkan oo hawlgab noqday isagoo 35 jir ah ayaa wadaaga sida uu ugu suurta galay inuu taas gaaro.
XIDHIIDHKA: 401K VS IRA: Waa 401k waa IRA | Isbarbardhig Buuxda Iyo Wax La Mid Ah
Wuxuu ka tagay shaqadiisii ​​lixda ahayd ee horumarinta software-ka ka dib markii uu ogaaday inuu keydsaday ku dhawaad ​​1 milyan oo doolar.
Ereygiisa 'qof walba ma awoodi doono inuu hawlgab ku noqdo 30 -meeyadii, laakiin helitaanka madax -bannaani maaliyadeed waa mid dad badan ay fahmi karaan'.
Waxaa jira lix qodob oo aasaasi ah Steve wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad dalbato inaad sidoo kale hawlgab noqoto goor hore. Waxay kala yihiin:
Ka dhig xorriyadda maaliyadeed mudnaanta 1aad
Si firfircoon u kordhi dakhligaaga
Samee maalgelin xikmad leh gaar ahaan qaddarinta hantida
Samee jimicsiga hab-ka-joojinta
Ka digtoonow sida aad u isticmaashid lacagtaada
Ka fogow waxyaabaha aan khuseyn
Qof hawlgab ah oo 32 jir ah ayaa sheegaya ahmiyadda ay leedahay diiwaangelinta kharashyadaada.
Sam oo ka soo shaqeeyay nooca maalgelinta muddo 13 sano ah ayaa Forbes ku tilmaantay mid ka mid ah kuwii hore hawlgab noqday.
Hadda, wuxuu maamulaa mareeg maaliyadeed shaqsiyeed. Sidoo kale, Sam wuxuu sii caawiyaa dadka maalgelinta, qorshayaasha hawlgabka, iyo siyaabo waaweyn oo lagu gaari karo madaxbannaanida maaliyadeed.
Sabatier oo ka tirsan baloogga lacagta Millenial -ka ayaa yiri 'Dakhliga maalgelinta ayaa ah dakhliga ugu dambeeya ee aan tooska ahayn, tanina waa istiraatiijiyadda ugu weyn ee hodantinadu u adeegsadaan labada inay hodan noqdaan oo hodan ku ahaadaan'.
Grant oo qiimahiisa saafiga ahi ka sarreeyo $ 1 milyan ayaa sheegaya '' Lacagtu waa uun walaac haddii aadan xiriir la yeelan ''
Isku daygaaga ah inaad hawlgab noqoto milyaneer ahaan, waxaa lagugula talinayaa inaad iska dhex rogto inta aad mudan tahay maalin kasta.
Marka hore, hawlgabku wuxuu u ekaan karaa mid aad looga naxo gaar ahaan marka aadan wax fikrad ah ka haysan inta aad ka tahay hawlgabka.
Anshax badan, waxaad arki doontaa naftaada oo si tartiib tartiib ah u dhigaysa dhagxaan si aad u samayso leben.
Sida Loo Noqdo Degane Florida | Qiimaha, Ogolaanshaha & Talooyinka
Haddii aad raadineyso inaad u guurto Florida sanadkan, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu sameeyo…
Dhibaatooyinka ka -guuritaanka dowlad -goboleed waxay noqon kartaa mid aad u daal badan. Waxaa laga yaabaa inaad soo dejisay…
Geoarbitrage: Maxay ka dhigan tahay? Sida Loo Jabiyo Goobtaada 2022
Weligaa ma ku fikirtay inaad ka tagto shaqadaada Maraykanka oo aad u guurto Australia si aad u bilowdo…